ဗီတာမင် အကောင်းဆုံးနှင့်ရိုးရှင်းသောဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုရရှိရန် Linux မှ
DMoZ | | applications များ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ရက်အနည်းငယ်အကြာကနေသူချင်း ArchLinux ငါ့ကိုပြန်လှည့်ပြီးငါ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုလုံလောက်တဲ့အဖြေပေးတဲ့ Geek-Minimalism ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကငါ့ဘ ၀ မှာအနည်းဆုံးဖြစ်တည်မှုကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် အချိန်ရဲ့လျော့နည်းမှုကပိုများတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသောခံစားချက်ပုံစံကိုပြင်ပသို့ဆွဲဆောင်သည်။
ငါစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ငါ့ရဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေနဲ့အကောင့်တွေအကောင့်စတင်စကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီး၊ ငါနဲ့ငါ့ရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေအကြားလက်ခံနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဤအဆင့်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်အမြင်အာရုံနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရသာကိုပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ပို၍ အသုံး ၀ င ်၍ အလုပ်လုပ်ရန် (စတိုင်မလုံလောက်ခြင်း) ဖြစ်သည်။
ကွန်ပြူတာစကားပြောရရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပျော်မွေ့စေမယ့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်စာရွက်စာတမ်းတွေကြည့်ဖို့နဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေကိုသွားကြည့်ဖို့ရွေးချယ်စရာတွေမလိုပါဘူး၊ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်ဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ကိုအပ်နှံရန်သာကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။
ငါ့နားကြားအာရုံကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတော်ကောင်းတရား၏တေးဂီတနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအရှုပ်တော်ပုံများတေးဂီတဖွင့်ပွဲများသို့အမျိုးမျိုးသောလျှောက်လွှာများကိုကြိုးစားပြီးသောအခါ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်၊ ဗီတာမင် ...
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ သူကဂီတဖွင့်စက်ပဲ၊ ဒါကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင် console ကနေပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါ့အပြင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးမလိုအပ်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေလည်းမရှိဘူး၊ အဲဒါဟာကောင်းကောင်း၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုပဲစားသုံးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ disk drive များ (internal သို့မဟုတ် external) တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဂီတကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သီချင်းဖွင့်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ မြင်တွေ့ခဲ့သူများသည်ရေတွက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ iTunes ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးနိုင်သည်။ကျွန်တော်သူ့နာမည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်မသိသေးဘူး).
၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတွေ့အကြုံကိုသင်ခံစားရန်နှင့်သင်ကမ္ဘာတွင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံရန်လိုအပ်သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဗီတာမင် ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်။
ငါတို့ရဲ့ console ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။
Arch Linux တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
$ vitunes -e ထည့်သည် ~ / တေးဂီတ /
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ~ / Music / directory အတွင်းရှိဖိုင်တိုင်းကိုဂီတဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့ထည့်သွင်းစေလိမ့်မည်။ ဗီတာမင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောလမ်းညွှန်အရေအတွက်မည်မျှပင်ရှိသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုးရှင်းစွာပြေးသည် အရက် နှင့်ငါတို့ဂီတခံစားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်မှတ်မိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် console တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပုံမှန်အမြင်အာရုံထိန်းချုပ်မှုများရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အောက်ပါတွင်“ Key” = Action ဟူသောပုံစံအတွက်သင့်အားအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါမည်။
« Enter » = ပြန်ဖွင့်ပါ။
"Z" = လက်ရှိပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုခေတ္တရပ်နားပါ။
« S » = လက်ရှိပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်ပါ။
« F » = လက်ရှိပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ၁၀ စက္ကန့်ဖြင့်တိုးပါ။
« F » = လက်ရှိပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ၁ မိနစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
"B" = ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းပြန်ဖွင့်ခြင်း
"B" = ၁ မိနစ်အတွင်းပြန်ဖွင့်ပါ။
«: Q » = ဗီတာမင်မှထွက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမည်ကိုသိသည် ဗီတာမင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုသူ၏အမြင်အာရုံရှုထောင့်ကိုအရောင်တင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတအပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုခင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းသောစာသားဖိုင်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
မှတ်စု: အစားထိုးနိုင်ပါတယ် vim သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏စာသားအယ်ဒီတာအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ - ပုံရိပ်၏ဖန်သားပြင်၊ column.length တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
display.20 artist.50, title.20, -length.XNUMX
ဒါကကော်လံ (၃) ခုကိုပြသမှာဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာပြင်မှာအက္ခရာ (၂၀) ​​ပါ ၀ င်သောအနုပညာရှင်၏အမည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းနောက်ခေါင်းစဉ်သည်အက္ခရာ ၅၀ ပါပြီးနောက်ဆုံးတွင်လမ်းကြောင်း၏အရှည်၊ , တုံးတို (-) ကကော်လံကိုညာဘက်ခြမ်းနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်။
၎င်းကိုသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်ကော်လံတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားအရောင်တစ်ခုသတ်မှတ်ရန်အချိန်ကာလ column = color_of_la_letra, color_of_background ။
အရောင်အနုပညာ = အစိမ်း၊ ပုံမှန်
အရောင်ခေါင်းစဉ် = အပြာ, default အ
အရောင်အရှည် = အစိမ်းရောင်, default အ
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသော၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောဂီတဖွင့်စက်ကို အသုံးပြု၍ ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသင်ယူပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် Vitunes မှပေးထားသောရွေးချယ်စရာများကိုများများစားစားပြုလုပ်လိုပါက man command ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းအားမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဒီအတွက်ငါတို့ console ကိုသွားပြီးရိုက်ပါ။
$ လူကို Vitunes
စာရွက်စာတမ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်သာစေရန်အတွက်ဤဆောင်းပါးကိုသွားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်သည်။ အဆိုပါ manpages အရောင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ဗီတာမင် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ရိုးရှင်းသောဂီတဖွင့်စက်ရှိဖို့ဘယ်လို
အနိမ့်ဆုံးနှင့်ကြော့ရှင်းသော၊ အလွန်ကောင်းသောဒေတာ… .. ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏နောက်ဂီတဖွင့်စက်အဖြစ်မှတ်ယူမည်။
des desdelinux နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဆောင်းပါးမှာလူအများရှေ့လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဘလော့ဂ်၏ of ည့်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ငါ့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက် elav မှကျေးဇူးတင်ပါသည်😀 !!! ...
console ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ငါကြိုက်တဲ့ moc ကိုသုံးတယ်
အစဉ်မပြတ်ငါ moc ဝတ်ဆင်ပေမယ့်ဒီကလေးကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ ငါ compile လုပ်ရမည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် debian testing repo တွင်မရှိသောကြောင့် (debian တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "configure make" ကိုမကြာခဏမကြောက်တော့ပါ) ။ ဒါပေမယ့် Vitunes စာမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့ vi-like ချည်နှောင်ထားတာတွေကကျွန်မကိုဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားကိုမှီလိုက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Zathura, vi ကဲ့သို့သော pdf စာဖတ်သူ။
dwb ကိုဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအဖြစ် check လုပ်သင့်သည် then …
ပြုစုခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း ... .. moc အများကြီးအားဖြင့်အနိုင်ရရှိ။
ငါသူ့ကို moc နှင့် ၀ င်ခွင့်နှင့်သူနှင့်ပိုသိကျွမ်းရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်, အခုငါ Gentoo xD ကိုသိကျွမ်းလာပြီ ... ငါပြောပြရန်လာလိမ့်မည် ...
စကားမစပ် ... ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုဘာကြောင့်စီရင်ချက်ချမလဲ။
ncmpcpp + mpd ကိုကျွန်တော်မသုံးမီကျွန်ုပ်အလွန်ကြိုက်ခဲ့သည်၊ ၎င်း၏တပ်ဆင်မှုကကျွန်ုပ်ကိုအချိန်ယူစေခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသော်လည်း၊ အချို့သော moc များနှင့်ပင်ကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်သည် Vitunes နှင့်တွေ့ဆုံပြီးတည်းခိုခဲ့သည်။ ဆက်ပြီးသူတို့အားလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသောသူတို့အားထပ်မံအခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည်။
PS ကျေးဇူးတင်ပါတယ် elav …
DMoZ ကြိုဆိုပါတယ်။ စကားမစပ်, MP3Blaster ကိုစမ်းကြည့်တာလား။
Hmm, စိတ်ဝင်စားဖို့။ ငါ ^^ ဒီတစ်ရက်ကြိုးစားပါ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက "V" iTunes xD: သူမအတွက်အပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့လိုက်ရသည်
ငါက iTunes ထက်ပိုပြီးမြင်ခဲ့ရသည်ကိုရည်ညွှန်းသည်ထင်ပါတယ်
ပိုပြီး Vi-Itunes ဝင်းလိုပဲဟုတ်တယ် ??? …ဒါဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချ😛…
ဒီတော့အနည်းဆုံးတော့ mouse ကိုသုံးတာလား။
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် Basic, Simple and Functional = D ဖြစ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကွန်ပျူတာများအရဆိုလျှင် mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်စေသည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် DDKS ကိုအနည်းဆုံး KDE ဖြင့်ပင်ကြည့်ခဲ့ရသည်၊ KDE သည်မဟုတျ အနည်းဆုံးတော့အခြားသူတစ် ဦး ၏ရေမြစ်ဖြစ်သည် ... 😛
xD ... ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ယခုကျွန်ုပ်သည်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများသာအသုံးပြုခြင်းကပိုမိုအဆင်ပြေသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် mouse ကိုသုံးနေဆဲဖြစ်သည်။
သင်ငါ ba-k မှညာဘက်ခဲ့ sieg84 အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ??? ...
ရိုဒလ်ဖို အလက်ဂျန်ဒရို ဟုသူကပြောသည်
အခုကြည့်နေတုန်း moc (music on console) ကိုသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးရင်ဒီစမ်းသပ်မှုကိုငါပေးမှာပါ။ အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ )
rodolfo alejandro အားပြန်ပြောပါ
Newport သဲသောင်ပြင်ပြင်ဆင်သည့်ပစ္စည်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Blog ကိုနှစ်သက်ပါတယ် Fromlinux.net ဘလော့ဂ်။ subscription သို့မဟုတ်တစ်ခုခုလို updates အသစ်ရဖို့ငါလုပ်နိုင်တာရှိပါသလား။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် RSS နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးပါလား ကံကောင်းပါစေ!
ပစ္စည်းပြုပြင် Newport သဲသောင်ပြင်မှတုံ့ပြန်ပါ
Thunderbird 13 ကိုချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ဖြင့်လာပါလိမ့်မယ်
နာရီအနည်းငယ်အတွင်း Firefox 11 ကိုရရှိလိမ့်မည်